कम उमेरमै बालिकाहरु बलात्कारको शिकार...?
scheduleबुधवार बैशाख ११ गते, २०७६
कम उमेरमै बालिकाहरु बलात्कारको शिकार…?
काठमाडौं, ९ कात्तिक । बालिकाहरु नै बलात्कारको उच्च जोखिममा छन् । सजिलै प्रलोभनमा पार्न सक्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नसक्ने भएकाले पनि उनीहरु बढी जोखिममा परेका हुन् । कञ्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका वडा नं २ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या यसैको एउटा उदाहरण हो । देशलाई नै तरङ्गीत पार्ने यस्ता घटना दैनिकजसो घटिरहेका छन् ।
बलात्कारका घटनामा बढी बालिका पीडित भइरहँदा पीडक भने १६ देखि २५ वर्षका व्यक्तिको संलग्नता ४० प्रतिशत बढी छ । ‘तथ्याङ्कले १८ वर्ष कम उमेरका बढी जोखिममा रहेको पाइयो, त्यसैले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम पनि स्कुल केन्द्रित गर्न लागिएको हो,’ महानिरीक्षक खनालले भने ।
आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले यही कात्तिक ११ गतेबाट उक्त कार्यक्रम देशैभरि लागू गर्ने तयारी गरेको छ । खनालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उपत्यकाको स्थानीय तहका प्रमुखलाई समेत उक्त विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदायसँग मिलेर आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी लागिपरेको जानकारी गराएका छन् ।
आव २०७४/७५ मा जबर्जस्ती करणीका एक हजार ४८० मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १० वर्षमुनिका २६१ र ११ देखि १६ वर्षका ५५० जना जबर्जस्ती करणीबाट पीडित भएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । अरु १० प्रतिशत १७ देखि १८ वर्षका छन् । करणी उद्योगतर्फ ७२७ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
लागुऔषधमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका नौ प्रतिशत र १९ देखि २५ वर्षका ४७ प्रतिशत संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कतिपय अझै पनि गुपचुपमै रहने गरेकाले पनि जघन्य अपराध बाहिर नआएको अधिवक्ता फूलमायाँ रानाभाट बताउँछिन् ।
बलात्कार घटनामा १६–२५ वर्षका ४० प्रतिशतको संलग्नता छ । हत्याका घटनामा पीडितको अवस्था २६ देखि ३५ वर्षका २७ प्रतिशत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको दिएको तथ्याङ्कअनुसार गएको आवमा ३९ हजार ३१५ वटा विभिन्न आपराधिक घटना भएका छन् । रासस
जब यमराजले साधूलाई डाँकूको सेवा गर्न भने …
ल्वाङवाला चिया बढी फाइदाजनक
उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट शासकको अचम्मै बनाउने खानपान
गर्भवतीलाई नुन र सुत्केरीलाई तेल
विश्वभर आत्महत्या गर्ने घटे
कान छेड्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक, यस्ता छन् फाइदाहरु
विश्वका ८० प्रतिशत महिला जान्दैनन् सही ब्रा चयन गर्न, खरिद गर्दा पुर्‍याउनुहाेस् ध्यान
किशोरीहरुलाई पुरुषको गिद्दे नजरबाट बचाउन ‘ब्रेस्ट आयरनिङ’
चीनले सि‌ंगल महिलालाई दिदैँछ ‘डेटिङ लिभ्स’
आज दिउँसो पनि पानी पर्ने सम्भावना, मौसममा भने क्रमिक सुधार
दैनिक सवा नौ घण्टा सुतेरै बिताउँछन् चिनियाँ किशोरहरु
सबैको ज्यान बचाउन सक्ने ‘गोल्डेन ब्लड’
एकै दिन तेस्रो धक्का, केन्द्रविन्दू धादिङ
काठमाडौं, ११ वैशाख । धादिङले बुधबार तीन भूकम्पको केन्द्रविन्दू बन्नुपर्‍यो । धादिङका विभिन्न स्थान केन्द्र बनाएर बुधबार...
यी दुई खेलाडी बेच्ने तयारीमा म्यानचेस्टर युनाइटेड
काठमाडौँ, ११ वैशाख । पछिल्लो समय म्यानचेस्टर युनाइटेडमा समस्या चुलिएको छ । एकपछि अर्को खेलमा खराब नतिजा आएपछि प्रशिक्षक...
एकाबिहानै काठमाडौंमा दुई वटा भूकम्पको धक्का
काठमाडौँ, ११ वैशाख । एकाबिहानै काठमाडौंमा दुई वटा भूकम्प धक्का गएका छन् । भूकम्पले बाह्रबीसेतिर केन्द्र बिन्दू बनाएको छ...
काठमाडौँमा एकाबिहानै भुकम्प
काठमाडौँ, ११ वैशाख । काठमाडौँमा एकाबिहानै भुकम्प गएको छ । करिब बिहान ६ बजेर ३० मिनेटा जाँदा भुकम्प गएको हो । यसबारे थप विवरण...
चेन्नई शिर्षस्थानमा उक्लियो
काठमाडौँ, ११ वैशाख । इण्डियन प्रिमियर लिगमा चेन्नईले सनराईजर्स हैदरावादलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । यो जितसँगै चेन्नई...
लोकतन्त्र दिवसको दिन कमल थापाको यस्तो कुरा
फाइल फोटो काठमाडौं, ११ वैशाख । मुलुकमा लोकतन्त्रको लडाईं चलिरहेका बेला राजाको पक्षमा दमनको नेतृत्व गरिरहेका थिए कमल थापा...
राष्ट्रपति भण्डारी चीन प्रस्थान, यस्तो छ भ्रमण तालिका
काठमाडौं, ११ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन प्रस्थान गरेकी छन् । बेइजिङमा दोस्रो पटक आयोजना हुन लागेको बेल्ट...
बार्सिलोना ला लिगा उपाधि नजिक
काठमाडौँ, ११ वैशाख । गएराति भएको स्पेनिस लिग ला लिगामा बार्सिलोनाले अलाभेसलाई २-० गोलले पराजित गरेको छ । यो जितसँगै बार्सिलोना...